Bishọọpụ Ọkpaleke Agbaala Alụkwaghịm
Bishọọpụ ụka katọliki na Dayọsisi Ahịara bụ bishọọpụ Peter Ọkpaleke agbaala alụkwaghịm n'ọrụ ụka ma chiliee aka elu na ya aarụchaala. Ya bụ bishọọpụ mere ka a mara mkpebi ya ahụ site n'ozi o zigaara onyeisi ụka Katọliki n'ụwa gbaa gburu gburu bụ Poopu Francis. Ọ gosiputara obi mwute ya banyere nsogbu ahụ dị na dayọsis ahụ kemgbe ihe rugoro ahọ isii, bụ nke ọ kọwara na ọ na-ebì ndụ ime mmụọ ya aka ọjọọ.
Read more: Bishọọpụ...
Igwè Ehi Awakpola Ọdụ Ụgbọ Elu Dị n'Akure
Ọ bụ nnọọ ejìje tụrụ ụwa anya dịka igwe ehi nọrọ n'isi ngwụcha izuụka gara wee wụchaa n'ọdụ ụgbọ elu n'Akure na steeti Ondo, wee gbochie ụgbọ elu ọbụla ịda ada ma ọ bụ felie efelie n'ọdụ ụgbọ elu ahụ.
Read more: Igwè Ehi...
Gọvanọ Willie Obianọ eguzobela òtù nhazi nke mmadụ iteghete mejuputara, maka ụlọ nkwari akụ Golden Tulip dị n'Agụlụ na steeti Abambra. Ka ọ na-eguzobe otu nhazi ahụ, gọvanọ Obianọ kọwara ha dịka ndị e hiri asaa naabụ n'anya wee họpụta n'ihi na gọọmenti ya chọrọ inweta nke kacha mma n'ihe ọbụla ọ na-eme ma kọwaa na ya nwere ezi olile anya na mmadụ ndị ahụ ga-ewebata ezi ọgụgụ isi ha na amalihe ha nwere iji mee ka nhazi ụlọ oriri ahụ bụrụ ịgba.
Read more: Obianọ Enyela...
A ga-arụcha owà mmiri Obosi n'oge adịghị anya -- Obianọ
E meela ka a mara na tupuu ọnwa ọzọ agwụ, na ọrụ ga-akụrụ ọnụ n'ọrụ ngo ịrụ ọwà mmiri na okporo ụzọ ahụ siri Minaj gaa ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị dị n'Ọnịsha, bụ nke dị na mpaghara Odume, n'Obosi nke steeti Anambra.
Read more: A ga-arụcha...
Anyị Agaghị Ebugharị Nhọpụta Anambra - INEC
Otu ahụ na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị na ntụli aka n'ala anyị bụ INEC n'aha ịchafụ ekwuola na o nweg...
Anambra na-Atụ Anya Inweta Metrik Tons Osikapa Ruru 600, 000 n'Ahọ a - Obianọ
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ emeela ka a mara na steeti ahụ na-atụ any...
Mba Togo enweputego ozi nke na-akọwa na ha ga-eme ntụli aka nke e ji ahọ onye isi ala n’abalị 15 n...
A kpọkuola ndị ụka n'ụwa gbaa gburugburu ka ha na-ejigide akparamagwa ezi onye otu Kraịstị ma na-e...
Ndị Gọvanọ Ndịda Anyanwụ Ejikọọla Aka Ọnụ Iji Buso Nsogbu Ha Agha
Otu jikọrọ ndị gọvanọ sitere mpaghara ndịda anyanwụ ala anyị akwaala arịrị banyere enweghị ihe nkw...
Ọchịchị m Emeela Ka Ala Naịjiria Magbuo Onwe Ya - Buharị
Onyeisi ala anyị bụ Muhammadụ Buharị emeela ka a mara na ọchịchị ya edebela ala Naịjiria n...
Obianọ Akpọọla Oku Ka E Nwee Ezi Mmekọrịta N'etiti Okpukperechi Dị Iche Iche
Aka na-achị steeti Anambra bụ gọvanọ Willie Obianọ akpọọla oku ka e nwee ezi mmekọrịta, ịdị n'otu ...